Apho Ukuze Fumana IiNdawo Left zemithwalo In Germany? | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Apho Ukuze Fumana IiNdawo Left zemithwalo In Germany?
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/03/2020)
Ukuhamba na adventure ultimate kodwa ufanele ukwenze oko emthwalweni free, ingakumbi layovers okanye ukuba une nje usuku simahla kwenye Jamani imizi ethandwayo. Sinazo zonke iinkcukacha kufuneka ukuba kwiindawo impahla ngasekhohlo eJamani ezintathu imizi yayo engundoqo, Berlin, eMunich, kanye Hamburg.
Nokuba wena ukuya Oktoberfest eMunich, emi-newu Brandenburg kwesango eBerlin okanye bexhamla vibe beqela Reeperbahn e Hamburg, ezi ndlela ilula kakhulu lula ukuqinisekisa ukuba impahla yakho kakuhle unonophelo ngoxa uhlole ithathwe.
Ekhohlo Ngena Iindawo In Germany: Berlin
at Tegel Airport, uya kufumana indawo imithwalo ekhohlo kwi Terminal A kwaye zivulekile yonke imihla ukususela 5 am ukuba 10:30 pm. Amaxabiso uya kuhlawula ayehluka € 7.20 ukuba € 9,90 kwaye kuxhomekeke kwisayizi bag yakho. Ubude bexesha zokugcina alipheli.
E Schonefeld Airport, uya kufumana indawo imithwalo endayishiya Terminal D Ukufika. iiyure zabo ngeCawa ukuya ngoLwesihlanu, ukusuka 7:30 am ukuba 11:30 emva kwemini nangoMgqibelo ukususela 8 am ukuba 6 pm. Amaxabiso aqala € 4 ukuya € 6 ukuze impahla ngesandla kwaye € 7 ukuya € 10 ukuze impahla eqhelekileyo lukhangelwe.
Ekhohlo zemithwalo Iindawo At Qeqesha ipetroli
Kube lula kwizikhululo zikaloliwe kuwe kukuba avulekileyo 24 iiyure ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki. I-Central Train Station (Hauptbahnhof) na apho uya kufumana neelokhari kwaye ibekwe epakini imoto ngaphandle kwesakhiwo ephambili kwindawo C.
Ngokuxhomekeka kubungakanani ilokhari udinga, iindleko phakathi € 4 € 6 ngosuku kunye nexesha yokugcina obukhulu 72 iiyure. Ukuba ukhetha ukutyelela i-ofisi lasekhohlo imithwalo, kukho uvula imihla ukususela 6 am ukuba 10 kwemini malunga € kwinto nganye 5.
Ezinye izikhululo USB ilokhari ziquka Alexanderplatz, Ostbahnhof, Potsdamer Platz and Zoologischer Garten. Kulula ukufumana iindawo impahla ngasekhohlo e Germany!
Ekhohlo Ngena Iindawo In Germany: eMunich
Munich Airport yeyona ndlela ilungileyo xa olindwendwelayo isixeko. I-Service Centre e Terminal 1 ivuliwe 24 iiyure kwaye kukho indawo yesibini Terminal 2 kodwa iiyure lokuvula zivela 5 mna ukuba ezinzulwini zobusuku imihla.
Uza kuhlawula phakathi € 5 € 10, kuxhomekeke kwisayizi imithwalo yakho ngokunjalo imixholo yawo. Hlola moya’ website ngaphambi kokuba zihambe ulwazi lwamva kunye nezinye moya Iindawo impahla ngasekhohlo e Germany.
Ekhohlo Ngena Iindawo At eMunich Qeqesha ipetroli
Ukugcinwa imithwalo Station Central Munich iya kuba yomoya kuwe. Kukho intabalala neelokhari kwaye kukho imiqondiso ukuze ufumane lula. A ilokhari standard kuyakubiza malunga € 4 ngosuku kwaye elikhudlwana, isuti-case ilokhari ertyisi malunga € 6 imihla. Kukho ke umda isithintelo iiyure-72.
ezinye izikhululo abaninzi kufakwe izixhobo ezifanayo.
Ekhohlo Ngena Iindawo In Germany: Hamburg
ukhetho lwakho kuphela eHamburg airport. I-ofisi Ekhohlo zemithwalo uba Terminal 2, level 1 Utyeshelo kwaye xa ngoMvulo ivuliwe ukuya ngeCawe ukusuka 4:30 am ukuba 11 pm. Uza kuhlawula phakathi € 5 € 25, konke kuxhomekeke kubukhulu. I elikhulu imithwalo yakho, imali lakho uphezulwana, kwaye moya kwakhona uhlawulisa € 3 njengoko kukho intlawulo processing ngexesha elinye-kwinto nganye.
Uyakwazi ukugcina impahla yakho apha amaxesha limited yaye okusemandleni alo ukukhangela phambili phambi kokufika yakho. Qokelela njengolwazi kangangoko unako uhamba phambi.
Njengokuba ezininzi kwizikhululo zikaloliwe eYurophu, wena kwithamsanqa kunye neelokhari kuzo zonke efikeleleka lula yaye sivulelekile 24 iiyure ngosuku. I-avareji yeendleko yi € 5 ngemini kwaye akukho zithintelo ubukhulu.
Iinkonzo Private: I 'Airbnb' Ngokuba zemithwalo
Kukho iinkampani ezimbalwa zisebenzisa inkqubo efana kakhulu nolo Airbnb, kuphela imithwalo. Zisebenzisa Ufuna kuphela ukuphendla kwindawo, ubhukishe uze ushiye ezingxoweni zenu kwindawo eqinisekisiweyo leyo elula kakhulu kuwe. Yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana iindawo imithwalo amasalela Germany.
Insurance idityanisiwe kwixabiso kwaye ke bayashiyana evela kwinkampani kwinkampani. Kwakhona uya kuba noxolo lwengqondo ukuba izingxobo zakho ezandleni ekhuselekileyo.
Le nkonzo yokugcina owaziwayo kakhulu ukuba kulula ukusetyenziswa kwaye ngexabiso kakhulu ngokwengqiqo. Uza kuhlawula irhafu omthebelele € 5 ibhegi ngosuku ngalunye. bag yakho nayo inshorensi kuba phezu € 800. bonke Kuba ifakiwe kwixabiso.
Wena ukukhangela nje website zabo indawo ekufuphi kuwe. Ke ngoko uza kuba nako ukukhetha ethile yakho 'StashPoint' yaye xa nokothula ezingxoweni zenu, ukubonisa host yakho ugcino zakho kwaye ihlelwa!
iinkonzo ezifanayo kule ziquka Nannybag and BagBnb. Ezi nkonzo ke eneneni ziyafumaneka kulo lonke elaseYurophu kwaye ngokulula kusetyenziswa Germany.
Xa uhamba nokugcina imithwalo iyafuneka, kusoloko kungcono ukuba ukulungele. Kabini khangela zonke iinkcukacha ze bafumane isisombululo esiquka umntu lula kuwe yaye apho uya khona. Nokuba yiloo moya, nokuqeqesha izitishi okanye bazingenele iinkonzo zabucala neninye online, ukuba iyafumaneka bonke Ngokucofa nje iqhosha. imithwalo Happy ze wonge imali kwi kumatikiti yakho ngololiwe kunye nokusetyenziswa Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Apho Ukuze Fumana IiNdawo Left zemithwalo In Germany?” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
leftluggage eMunich trainjourney Tranride Isikhululo sikaloliwe train Travel umhambi travelgermany travelhamburg